သဒ္ဒါနှင့်ပါတ်သက်သော မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ (အပိုင်း ၁) - Myanmar Network
သဒ္ဒါနှင့်ပါတ်သက်သော မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ (အပိုင်း ၁)
Posted by Soe Soe Win on January 29, 2014 at 11:02 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စကားကို မိခင်ဘာသာစကား (native speakers) အဖြစ် ပြောကြသူ အများစုသည် အညွှန်း စကား (determiners) ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို မသိကြပါ။ ဒါပေမဲ့ အညွှန်းစကားတွေကို အသုံးပြုတဲ့အခါ အမှားပါသွားတာကို ကြားကြရင်တော့ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီဆိုတာကို ချက်ချင်းတန်းသိကြပါတယ်။ အညွှန်းစကားတွေဟာ စကားလုံးအနေဖြင့် သေးငယ်ပေမဲ့ အဓိပ္ပါယ်မှာတော့ အများကြီး ကွာသွားပါတယ်။
အခု တင်ပြသွားမှာကတော့ Oxford University Press ဝဘ်ဆိုက် မှ "Grammar to Go" သင်ခန်းစာ စာအုပ်ကို ဖတ်သူများမှ မေးမြန်းထားသည့် မေးခွန်းအချို့ရဲ့ ဖြေကြားချက်များအား Rachel Godfrey မှ ပြန်လည်ဖြေကြားထားသည်များကို ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
1. Some နှင့် any ကို ဘယ်အခါမှာ ဖြုတ်ထားနိုင်ပါသလဲ? (When can we omit some and any?)
နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်စပ်နေတဲ့ အရာဝတ္ထုအကြောင်းတွေကို have (got) ဖြင့် မေးခွန်းမေးပြီး အဖြေကိုလည်း ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ် (yes) လို့ ဖြေမှာကို သိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ some နှင့် any ကို ဖြုတ်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ- နှင်းဘုတ်ပြားစီးခြင်း (snowboarding) နှင့် ပတ်သက်သော စာအုပ်ကို သာမာန်စာအုပ်ဆိုင် (general bookshop) မှာ သွားရှာရင် မေးမဲ့မေးခွန်းကတော့-
Have you got any books about snowboarding? (နှင်းဘုတ်စီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ် တစ်လေများရှိပါသလား?။)လို့ မေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အားကစားစာအုပ်ဆိုင်(sports bookshop) မှာဆိုရင်တော့-
Have you got books on snowboarding? ဆိုပြီး any မပါတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ မေးမှာပါ။
နောက် ဥပမာ ထပ်ပေးရရင်တော့-
Have you got brothers and sisters? (ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေရှိပါသလား?) လူတွေဟာ အများအားဖြင့် ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမတွေရှိ တတ်ကြပါတယ်။
How does it move? Has it got wheels? (အဲဒါက ဘယ်လို ရွှေ့ရှားလဲ? ဘီးပါသလား?) ရွှေ့ရှားနိုင်သော အရာများသည် ဘီးပါလေ့ရှိပါတယ်။
We've just boughtacamper van. How nice! Has it got curtains? (ကျွန်တော်တို့ အခုတင်ပဲ အားလပ်ရက်အပျော်စီးကားကြီးတစ်စီးဝယ်ခဲ့တယ်။ ကောင်းလိုက်တာ! အဲဒါမှာ လိုက်ကာတွေ့ပါလား?) (Camper van တွေမှာများသောအားဖြင့် လိုက်ကာတွေပါတတ်ကြပါတယ်) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
2. ဘာကြောင့် "a hour" လို့ မပြောပဲ "an hour" လို့ ပြောတာပါလဲ? (Why do we say "an hour", notahour"?)
ရေးတဲ့အခါမှာဗျည်း (consonant) နဲ့ စပေမဲ့ ဖတ်တဲ့အခါ သရသံ (vowal sound) ထွက်တဲ့ hour ကဲ့သို့သော စကားလုံးတွေရှေ့မှာ an ကို အသုံးပြုရပါတယ်။
an MP3 player. (MP3 စက်တစ်လုံး)
an honest man. (ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောသူ တစ်ဦး)
an L-shaped room ( L ပုံသဏ္ဍန်ရှိသော အခန်းတစ်ခန်း)တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် ရေးတဲ့အခါ သရ (vowel) နဲ့ စရေးပြီး ဖတ်တဲ့အခါ ဗျည်းသံ (consonant sound) ထွက်တဲ့ စကားလုံးတွေ ရှေ့မှာaကို အသုံးပြုရပါတယ်။
a university (တက္ကသိုလ်တစ်ခု)
3. other ကို ဘယ်အခါမှ သုံးပြီး the other ကို ဘယ်အခါမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။ (When do we use other and when do we use the other?)
"the other one or other + ရေတွက်၍ ရသော အနည်းကိန်းနာမ်(singular countable noun)" ပုံစံကို ဆင်တူသော singular countable nouns" (၂) ခုထဲက ဒုတိယနာမ်အကြောင်းကို ပြောရာ၌ အသုံးပြုပါသည်။
I bought two T-shirts. One is blue with green stripes and the other one / the other is green with white stripes. (ကျွန်တော် T-shirt ၂-ထည် ၀ယ်ခဲ့တယ်။ တစ်ထည်ကတော့ အပြာပေါ်မှာ အစိမ်း အဆင်းတွေနဲ့ ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်တစ်ထည်ကတော့ အစိမ်းပေါ်မှာ အဖြူအဆင်းတွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။)
the others နှင့် the other ones ကိုတော့ တူညီတဲ့ ရေတွက်နိုင်သော အများကိန်းနာမ်အုပ်စု(၂)ခုထဲက ဒုတိယအုပ်စုအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
There are seven books in the series. The first two books are really good but the other / the other ones are not so good. (ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ စာအုပ် (၇)အုပ်ပါတယ်။ ပထမ(၂)အုပ်က တကယ့်ကို ကောင်းပေမဲ့ ကျန်တာတွေ/ကျန်တဲ့ အုပ်တွေက အဲဒီလောက် မကောင်းဘူး။)
Some………. Others or other + ရေတွက်၍ ရတဲ့အများကိန်းနာမ် (plural countable noun) ပုံစံကိုတော့ အုပ်စုတစ်စုတည်းကအရာအချို့ကို အဲဒီအုပ်စုထဲက ကျန်တဲ့အရာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောတဲ့ အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Some colours, like blue and purple, are 'cold' colours. Others / Other colours, like red and orange are 'warm' colours. (အပြာနဲ့ခရမ်းရောင်ကဲ့သို့သော အချို့အရောင်တွေက 'အေး' တဲ့အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အနီနဲ့လိမ္မော်ရောင်ကဲ့သို့သော အခြားအရောင်တွေကတော့ 'နွေး'တဲ့အရောင်တွေဖြစ်ပါ တယ်။)
Some people like going out and talking to friends. Others / Other people prefer spending time along. (တချို့လူတွေက အပြင်ထွက်ပြီး မိတ်ဆွေတွေနဲ့ စကားပြောကြရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ တခြား လူတွေကျတော့ တစ်ယောက်တည်းနေရတာကို ပိုပြီး နှစ်သက်ကြပါတယ်။)
4. အဲဒါက ပုံမှန်ကိုလာလား သို့မဟုတ် ကိုလာအကြီးလား? 'a' ၂ ခုစလုံးလိုအပ်ပါသလား? (Is thataregular oralarge cola? do we need both 'a's?
ပို၍ ထူးခြားပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သား (extra clarity) ရန်အတွက်ဆို 'a' ကို ထပ်ကျော့ပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
Is thataregular oralarge cola? (အဲဒါက ပုံမှန်ကိုလာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုလာအကြီးလား?)
Do you live inabig orasmall house? (ခင်ဗျား အိမ်ကြီးမှာနေလား၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်လေးမှာ နေလား?)
ဒါပေမဲ့ အရှေ့က 'a' တစ်လုံးတည်းနဲ့လည်း အဲဒီဝါကျ (၂)ခုလုံးက မှန်နေပါတယ်။
Is thataregular or large cola?
Do you live inabig or small house?
အင်တာနက်ပေါ်တွင်အာရုံစိုက်မှုကြိုးစားရယူခြင်း (Fighting for e-attenti...
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Heaven knows/Goodness knows...
ထုတ်ပြောလာအောင် ဆွဲဆောင်တတ်ပါစေ (Pull them with you by Guy Perring)
Permalink Reply by ayemyo on June 24, 2014 at 10:07
Why can't I copy your lessons to save?